Ligue 1: Lille oo laga sameeyay Lille, PSG weli wali kuma guuleysan Faransiiska - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS »Horyaalka 1: Lille oo laga sameeyay Lille, PSG weli ma ahan horyaalka Champion-ka
Ligue 1: Lille oo laga sameeyay Lille, PSG weli ma ahan horyaalka Champion-ka
Isbuucii la soo dhaafay ee kulankii Strasbourg, PSG ayaan wali hirgelin karin horyaalka horyaalka Faransiiska ee u muuqda inay u muuqdaan. In Lille, biknohiinkiisa, Parisians ayaa hoos u dhacay ilaa toban ka hor intaysan qulqulin (5-1).
Dhab ahaan, xilli ciyaareedka PSG, xitaa haddii ay si lama filaan ah u dhammaato oo ay ku dhammaato horyaalka sideedaad ee horyaalka Faransiiska, ma laha wax lug ah oo caafimaad ah. Horaantii Isbuucii lasoo dhaafay Strasbourg ayuu u dabaaldagayay dabaaldegiisa, PSG ayaa biyo qabatay Lille, oo ah bustfin. Taariikhda (5-1) taariikhda ragga Thomas Tuchel, tan iyo markii kooxda Paris aanay wax khibrad ah ku lahayn 1 League tan iyo sanadka 2000 iyo ceelkii la midka ahaa ee laga helay Sedan.
ayaa haatan 8 dhibcood ka sareeya Olympique Lyonnais, kaalinta 3aad. OL, kuwaas oo todobaadkan ku daray guuldaradii seddexaad oo isku xigta tartamada oo dhan, imploding ee Nantes (2-1), oo arka St. Stephen, guusha ee Bordeaux (3-0), ku laabto saddex dhererka laga bilaabo booskiisa saddexaad.
OM weli aaminsan
Xitaa Olympique Marseille, kuwaas oo u muuqday in ay rujisay xilli weli uu jiro toddobaad ka dib markii kulan xun, dib u ciyaarta tartanka loogu jiro podium. rajo A caato ah lagu hayo by guusha ee ay ka horyimaadeen Nimes at the Velodrome (2-1) iyo gelinayn kooxda OM shan cutub oo OL ee, halka inta soo hartay lixdii kulan ee uu u ciyaaro.
Ugu dambeyntii, wax waliba waa in la sameeyaa miiska, halkaas oo Dijon, Caen iyo Guingamp ay si tartiib tartiib ah ugu tartamayaan meesha barafka. Hadda, labadii sanno ee la soo dhaafay ayaa si aan caadi ahayn loo jabiyay. Caen oo lumiyay Angers (0-1), waa hoggaamiye casri ah, ka hor Guingamp, oo keenay dhibic ka timid Strasbourg (3-3). Laakiin Dijon, Amiseen (0-0), waxay leeyihiin meel yar oo horey u socota, waxayna u badan tahay inay la halgamaan ilaa fiidkii maalinta 38th.
Qodobka Source: https://www.france24.com/fr/20190414-football-ligue-1-lille-psg-resultat-mbappe
Suarez oo rajeynaya inuu soo afjaro abaarta kooxda CL halka Barca ay wajihi doonto Man U
Horyaalka Premier League: Liverpool waa kooxda Chelsea oo hogaanka u heysa horyaalka.